Hooded Towels, Baby Towels, Royal Velvet Towels, ingubo Umkhiqizi - Bailixin
Gxila emhlabeni okukhethekile futhi ezingabizi ikhaya yendwangu enkampanini yethu! Sinikeza amathawula nezingubo zokulala umndeni ngamunye ngamanani ezifanele.
amaqoqo yethu efakiwe okugeza ezithambile ithawula amasethi, cool wangaphandle ezemidlalo ithawula nama lolwandle amathawula, imfashini ekhishini ithawula nama embhedeni ingubo ukunakekelwa set.Comprehensive empilweni yakho.
Zero Twist ntambo Series
Amanzi Absorption Ngo bo-3 Akukho Agent fluorescent, Uyezwana Nemvelo
Ihhotela ithawula Series
High-Quality Melika Ukotini ntambo
European Futhi American Style Design
Four-ungqimba gauze Kwengubo
Ecophelelayo Nokwelukiweyo Technology
Indlela Yokukhetha Towels
Ukuthenga amathawula kuyinqubo ebucayi. Impela, ufuna ukuthenga amathawula ukuthi bazizwa esithambile futhi zikanokusho, kodwa lokho akusho 'igremu count' Kusho ngempela? Futhi kanjani umehluko phakathi ukotini Turkish ukotini yaseGibhithe noma ukukhetha rainbow imibala kanye amaphetheni? Ngaphambi niphonsa ithawula maduzane, kuthathe isikhathi ukufunda Umhlahlandlela yethu Ukugunda ngezansi. Sithole bahlangana futhi iqoqwa konke odinga ukukwazi mayelana nendlela ukukhetha amathawula ngezigaba ezinhlanu eziyinhloko, kusukela ubukhulu nesisindo ukuze ukwakhiwa, ngakho ukuthi usesho lwakho zizohamba njengoba ngokushelela ngangokunokwenzeka.
Ukugeza Nge yokuwasha Kakhulu
Kungani lokhu kuyinkinga: yokuwasha Ukuzifaka kakhulu kungadlulisela empeleni stiffen amathawula. Plus, kungcono akudingekile. "Towels kakade ukuncela insipho asalile imizimba yethu amandla, ngoba ujwayele isikhumba esomile ehlanzekile, zingenalo ukuthi ukungcola okuningi," kusho uDonna Smallin Kuper, eqinisekisiwe indlu yokuhlanza uchwepheshe nombhali Yokuhlanza Plain & Simple. Isixazululo: Sebenzisa kwesigamu yokuwasha ungadinga okwesikhathi ukugeza evamile, noma yeqa ke "Njalo ngemva izona umane usebenzise uviniga," kusho Carolyn Childers, abakhulu ekhaya isikhulu Imidlalo ..
Inkhombandlela Ukuthenga zokulala
Lapho okushisa nasebusuku ukuthatha Tumble, ukufinyelela i-yokulala ungeze esinye isendlalelo imfudumalo ethokomele embhedeni wakho. Zokulala bavame ukuya ezingabonwayo futhi Unsung - kungcono umduduzi wakho noma duvet esithatha lokukhokhisa phezulu njengoba inkanyezi embhedeni, amashidi yakho loniketa gona ka umsungulo isikhumba wakho okunxanelayo, kodwa ingubo, esakhiwe e phakathi kwale mililo emibili ukuthi kudala i ephaketheni esingeziwe emoyeni ukukugcina efudumele. Uma kuziwa ukuthenga ingubo, ungase ucabange khona '.
Wake wezwa ngengubo bamboo? Kuyinto umkhiqizo kakhulu enikeza eziningi induduzo. Lezi zokulala zenziwa kusukela ultra bamboo ezithambile fibre elenza enkulu ngawe Snuggle in.Bamboo ingubo luncanyelwa ngabaningi ngenxa umsungulo yayo enikeza induduzo ukugqanyiswa. Bamboo Yaziwa impahla yayo elwa namagciwane. Iqukethe bamboo Kun, okuyinto ejenti yemvelo elwa namagciwane. It has ikhono ukubulala amagciwane kanye izinambuzane ezibeka izinsongo ezibucayi empilweni.